Inkanyezi yama-90 u-Alyona Apina uhlukanise nomyeni wakhe ngemuva kweminyaka engu-25 yomshado
Omunye umbhangqwana oqinile wezokuhweba wasekhaya wakhipha ukwahlukana kwawo. Kulo nyaka, u-soloist weqembu elithi "Inhlanganisela" ethandwa kakhulu kuma-90s, u-Alain Apin, wabika ngesahlukaniso nomyeni wakhe. Izindaba zakamuva zihlakazeka ngokushesha kwiNet.
Ngomyeni wakhe, umkhiqizi u-Alexander Iratov, umculi wahlala emshadweni iminyaka engu-25! Yebo, yebo, futhi futhi 25! Khumbula ukuthi ngo-Mashi kulonyaka, uSvetlana noFyodor Bondarchuk bamemezela ukuhlukana kwabo, ababesebeneminyaka engu-25 ndawonye. Ngempela, usuku oluhle kakhulu ...
Kungani u-Alyona Apina no-Alexander Iratov behlukanisile?
Kubonakala sengathi u-Alena Apina no-Alexander Iratov noBondarchuk baye bahambelana nenani leminyaka ababehlala kuyo, kodwa futhi nezizathu zokuhlukaniswa. Ngokusho komculi, lo mbhangqwana wawumane ukhathele omunye nomunye:
Esikhathini sesehlukaniso asikho abahlukumezi. Mina noSasha azange sihlangabezane nanoma ubani omusha. Ngesinye isikhathi, saqala ukukhathala, wonke amaphuzu othintana naye ayanyamalala, izithakazelo zahlukana, futhi ngezinye izikhathi ngabona ukuthi isahlukaniso singenakugwema
Mayelana nale mbhangqwana uyindodakazi kaKsenia. Intombazane ineminyaka engu-14 ubudala, futhi abazali bakhathazekile ngokuthi ukuhlukana kwabo kungaba yinkinga enzima kumuntu osemusha. Nokho, isinqumo sakhe sokuhlukanisa u-Alyona Apina ngeke sishintshe.
Indodana kaMichael Teryokhin inqobile i-Instagram ngethalenta lakhe, ividiyo
U-Alexander Oleshko akasincoma ukuthi adle izinkuni zomhlanga
U-Victor Drobysh uhlaselwe ku-Instagram ngokugxeka u-Olga Buzovoy
Ngemuva kokubuyisana, u-Andrei Arshavin wanikeza umkakhe ithuba lokuphumula
UMama Timati wavuka ukuze avikele abazali be-Alice encane
Ngesonto lomshado, uPaulina Andreeva waguqula ngaphezu kokuqaphela, isithombe
Imishado ngeke ibe: Chaliapin waphonsa Kalashnikov ngenxa Borodina odade othandekayo
Ingulube ene-artichokes eqoshiwe kanye nesinaphi
Indlela yokugcina ukukhanya kwezinwele
Kuthiwani uma umfana engafuni ukusebenza?
Isaladi ehlukanisiwe ehlelekile "Ngijabule"
Mascara ephelele - konke kusezandleni zakho!
Isobho se-Thai Tom Yam
Dala umfanekiso wesifazane oyindlovukazi. Sakhetha izingubo, izesekeli, ukwakheka, izinwele
Usizo lokuqala ezimweni ezibucayi ngesikhathi socansi
Ikhono lokuzilibazisa lokuzilibazisa
Amakhambi omphakathi okwelashwa nokusheshiswa kwezinwele zokukhula
Indlela yokwenza izinwele zikhudlwana futhi zinyene?
Indlela yokuziphatha nomama-mkhwenyana odabukayo
U-Anna Netrebko waba yisisulu somkhuhlane wamagciwane
Isaladi kusuka ku-podberezovikov